Dantaa alaa ABO: Sagantaa siyaasaa kan jijjirre hin qabnu - BBC News Afaan Oromoo
Wiixata darbe mootummaa Itoophiyaa waliin waliigalteerra kan gahe Addi Bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa isaa akka hin jijjiirre hime.
Addi Bilisummaa Oromoo kaayyoo 'hiree ofii ofii murteeffachuu' uummata Oromoof qabsoo eegale kan jedhan itti gaafatamaan dantaa alaa ABO Dr. Shiggux Galataa san kan nu gachisiisu uummata qofa jedhu.
ABO'n yeroo mara foxxoquu Oromiyaa waliin maqaan isaa ka'a.
Akka Dr. Shiggux jedhanitti garuu jalqabumaa ABO'n kaayyoo foxxoquu hin qabu ture.
"Kan foxxoqamu wanta dura waliigalamee ijaarame irraati, Oromoon garuu waan fedhiidhaan godhe tokko hin qabu."
Kaayyoon ABO uummatni Oromoo hiree ofii murteeffachuu argatee, hegeree isaa akka murteeffatu gochuudha jedhu Dr. Shiggux.
"Aangoon kana murteessuu kan uummataati," jedhu.
Mirgi Oromoo, mirgi dhala namaa akka nam-tokkeetti akka kabajamu, akka walootti ammoo mirgi uummataa akka kabajamufidha.
Kana mirkaneessuuf baroota darban keessa gama siyaasaa, dippiloomasiifi waraanaa dhawaataan ammoo sochii uummataan dabalatee qabsoo gaggeessaa ture.
Dhimmi fottoquu ABO waliin ka'u gaaffii Oromoo sadarkaa biyyattis idil addunyaattis fudhatama dhabsiisuurratti kan kaayyefate akka ta'ee fi ammas akkamitti haa jiraannu kan jedhu murtee uummata Oromoo ta'uu himan.
Qabsoo Oromoo dhimma fottoquurratti rarraasuun sabaaf sablammoota sodaachisuufi wareersuu caala Oromoon yaadaan, amantaa fi gosaan akka walqoodu gochuun tokko ta'ee akka hin jabaanne godheera fuuldurattis kun waan irratti hojjetamuu qabu jedhan.
'ABO'n hin jiru'
Qabsoon Adda Bilisummaa Oromoo baroota hedduu lakkoofsisuu irraa kan ka'e ABO'n hin jiru sadarkaa jedhamurra gaahamee ture.
Haa ta'u malee akka Dr. Shiggux jedhanitti "waraanni ABO guyyaa itti Oromiyaa keessaa dhibee beeku hin jiru."
Caasaan ABO's magaalaa Finfinnee irraa eegalee hanga baadiyyaa Oromiyaatti diriiree jira jedhu.
Mootummoonni Itoophiyaa wal duraa duubaa dhufan gaaf fedhan hin jiru, gaaf fedhan ammoo jira jedhanii hanga labsii shororkeessummaa labsuutti gahaniiru jedhu.
''Namni hedduun yeroo baayyee kan diidarraa dhufu itti fakkaata dhugaadha hoogganni muraasni biyyoota ollaa keessa jira waraanni garuu guyyaa itti Oromiyaa keessaa dhibe hin jiru.''
Caasaan ijaarsa uumataa fi miseensaa Finfinnee hanga baadiyyaatti ni jira. akkasiinis qabsaa'aa ture jedhu Dr. Shuggux.
Hudhaalee milkaa'ina ABO
Qabsoon ABO qormaat hedduu keessa darbe kan jedhan Dr shuggux sababoota ijoo qabsoon kun dafee milkaa'ina hin arganneef tarreesaniiru:
ABO'n wayita miidhaan Oromoo sadarkaa Oromoon of wallaalurra gahetti kan biqile waan tureef, Oromoon ani Oromoodha jechuu yeroo saalfatetti, eenyummaan isaa biyyoota ollaa keessatti yeroo hin beekamnetti ta'uun isaati.
Qabsoo hidhannoo gaggeessu keessatti biyyootiin gaanfa Afrikaa qabsoo kanatti hudhaa turan.
Xiyyeeffannaa Mootummaan Itoophiyaa walduraa dubaan dhufanii gaaffii Oromoo akka mangaagaa leencaa keessaa foon baasuu godhaniiti ilaalu.
Image copyright SBO
Qabsoo waggoota afran darbanii keessatti qoodni ABO hangam ture?
Qodni ABO'n qabsoo waggoota muraasa darbanii keessatti qabu namaa namatti gargar ta'uu malaa jedhu Dr Shuggux.
''Kan qeerroo bu'uuressee, haala walxaxaa keessatti qeerroon bilisummaa hojjechuu akka danda'u kan gadi dhaabe ABO dha.''
''Qabsoo bilisummaa karaa qeerroo gaggeefame kana qabsoo ABOrraa namni adda baasee yoo ilaale dogoggirri kan jiru bakka kana'' jedhu.
''Qabsoon Bilisummaa Oromoo gaafa Oromoon marti ofitti fudhatee, keessatti qooda fudhate bilisummaasaaf gaha amantii jedhu qabna ture isuma kanatus mirkanaa'e. kana keessatti qabsoo ABOtu citaa kaahaa dhufe.''
Waraanni Bilisummaa Oromoo Qerroo Bilisummaa Oromoo humna jiruu kanaaf ta'u hojjechuurratti qooda guddaa baheera utubaa tures jedhaniiru.
Qabsoo waraanaa fi sochii uummataa wal keessa naquu waan hin feeneef beekaa duubarra oolchine jechuun erga diddaa maaster pilaanii Finfinnnee booda qabsoo godhamaa ture keessaa harka akka qaban ibsan.
Waraana hiikkachuu ABO
Duras dirqiin gara qabsoo waraanaatti gale ABO'n kan jedhan Dr. Shuggux, amma nagaan ABO'n yaadaa fi sagantaa isaa biyya keessatti tarkaanfachiisuf yaada mootummaan dhiyaate fudhateera jedhan.
''Haala waliigaltee kanaan sababa qawwee kaasnee waraanatti seennu hin qabnu.''
''Waraana hidhatee jiru sirna akkamiin waliigaltee kana keessatti hammatama kan jedhu irratti hojjetamaa deema'' jedhan.
Hooggansi ABO biyya hambaa jirus wayita biyyatti deebi'u ''kaayyoo fi sagantaa siyaasaa keenya kan jijjiirre hin qabnu. mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu uummata Oromoo dhugoomsu kan jedhu ittuma jirra'' jedhaniiru Dr. Shuggux.
''Uummatni kaayyoo kanatti yoo itti amane ni fudhata yoo itti hin amanne kaayyoon kun akkuma habaaboon gogu ni goga.''